‘बिमा व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा बढ्यो, अब पहुँच बढ्छ’ :: कमल नेपाल :: Setopati
‘बिमा व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा बढ्यो, अब पहुँच बढ्छ’
हालै संचालनमा आएका तीन जीवन बिमा कम्पनीमध्येको एक युनियन लाइफ इन्स्यारेन्सले गत असोज ६ गतेदेखि औपचारिक रुपमा आफ्नो व्यवसाय थालेको छ। । जीवन बिमाको व्यवासाय, पहुँच तथा नयाँ कार्यदिशाका सम्वन्धमा सोही कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लाल कर्णसँग कुराकानी गरेका छौँ। नेसनल लाइफको एसिस्टेन्ट पदबाट बिमा क्षेत्रमा लागेका उनी यसअघि सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका जिएम थिए। एमबिए अध्ययनको पुरा गरी १० वर्ष जीवन तथा १० वर्ष निर्जीवन बिमा व्यवसायमा रही अनुभव संगालेका कर्णसँग सेतोपाटीका कमल नेपालले गरेको कुराकानीः
व्यवसाय छैन, नयाँ जीवन बिमा कम्पनीहरु अनावश्यक थपिए, अब ति कम्पनीले व्यवसाय गर्न सक्दैनन् भनेर पुरानाले भन्ने गरेका छन्, के त्यस्तै हुन लागेको हो ?
नयाँ बिमा कम्पनीहरु थप्नु सान्दर्भिक थियो र बिमा समितिले जे गर्यो त्यो ठीक छ। व्यवसाय त गरे न हुने हो। हाम्रो कुल जनसंख्यामा ८ प्रतिशत संख्या मात्रै बिमाको पहुँचमा छ। बाँकी जनसंख्यालाई पनि हामीले बिमाको पहुँचमा त ल्याउनुपर्यो।
यसको मतलव हाम्रा बिमा कम्पनीहरुका लागि ठूलो बजार बाँकी छ, अब उपयुक्त तरिकाले व्यवसाय गर्नु जरुरी छ। नयाँ जीवन बिमा कम्पनीहरु थपिएपछि हामीबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ, यसले स्वभाविक रुपमा ग्राहक बढाउन प्रेरित गरेको छ।
अन्ततः यसबाट बिमाको पहुँच विस्तार हुने हो। अबको दुई वर्षभित्र बिमामा पहुँच दुई गुणा बढाउन सकिन्छ। अब पुराना र नयाँ सबै कम्पनी आफ्नो व्यवसाय बढाउन लाग्नेछन् यसले बिमामा पहुँच पनि बढाउँछ।
तपाईहरु शहरमुखी हुनुभयो, ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई त बिमा भनेकै थाहा छैन, शहरमा बसेकालाई पनि आकर्षित गर्न सक्नुभएको छैन यसैगरी पहुँच बढ्ला त ?
ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच पुग्दै नपुगेको भन्ने होइन, तर बढाउनुपर्नेछ। यसअघिसम्म प्रतिस्पर्धा कम थियो, शहरबाटै व्यवसाय ल्याउन सकेकाले पुराना कम्पनीहरु पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भनेजसरी जान नसकेका होलान्। अर्कोतर्फ जनशक्तिको अभाव पनि प्रमुख कारण हो।
तर अब कम्पनीहरु थपिएसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा जाने क्रम सुरु भइसकेको छ। जनशक्ति पनि बढ्दै गएको छ। सदरमुकाममा कार्यालय रहे पनि हामीले उत्पादन गर्ने अभिकर्ताहरु ग्रामीण भेगसम्म पुगेर प्रत्येकलाई बिमाको बारेमा बुझाउने छन् र पहुँचमा ल्याउने छन्।
तर अभिकर्तालाई हामीले सही रुपमा नियमित ‘गाइडलाइन्स’ गर्नुपर्छ। किनभने जीवन बिमा क्षेत्रमा तालिम लिएका अभिकर्तामध्ये पनि अहिले ३० प्रतिशतले मात्रै आफ्नो पेशालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। बाँकी ७० प्रतिशत निश्क्रिय छन्।
त्यसैले अभिकर्तालाई हामीले पुर्नताजकीकरण गराई हौसला दिइरहनुपर्दछ, ताकि उनीहरुले आफ्नो पेशालाई निरन्तरता दिन सकून्। यसले भोलिका दिनमा जनशक्तिको अभाव पनि खड्किँदैन र पहुँच पनि बढ्छ। त्यसै शहरी क्षेत्रमा पनि बिमा सम्वन्धी पर्याप्त सचेतनाका कार्यक्रमहरु हुन सकेका छैनन्। यसका लागि बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरु सबै लाग्नुपर्दछ। अब सुतेर व्यवसाय हुँदैन।
बिमा गरेकाहरु पनि कम्पनीहरुप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्। समयमै क्षतिपूर्ति नपाइने गरेको, अनेक झन्झट व्यहोर्नुपरेको, अनावश्यक दुःख दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
निर्जीवन बिमा कम्पनीमा त्यस्ता भएका होलान्। तर जीवन बिमा कम्पनीमा अत्यन्तै न्यून छ। जीवन बिमा गरिसकेपछि संभावित जुन घटनालाई तोकिएको छ, त्यसैबाट क्षति भयो र प्रमाण जुट्यो भने सहजै क्षतिपूर्ति पाइन्छ, त्यो भइरहेको छ।
तर कतिपय सन्दर्भमा सर्वसाधारणले बुझेर या नबुझिकन नाजायज फाइदा लिन खोज्ने प्रबृत्ति पनि देखिन्छ। जस्तै ः दुर्घटना बिमा गर्नेको अन्य रोगका कारणले मृत्यु भयो भने त क्षतिपूर्ति पाइँदैन। तर दुर्घटना भएको बनाउन खोज्ने वा क्षतिपूर्ति नपाएपछि गलत रुपमा व्याख्या गरिदिने भएका कारण आरोपहरु लाग्ने गरेको हो।
यदी दुर्घटनाबाटै मृत्यु भएको अवस्थामा हकवालाले त्यसको प्रमाण ल्यायो भने क्षतिपूर्ति सहजै पाउँछ। कुनै पनि बिमा कम्पनीहरुले आफ्ना ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिन नपरोस् भन्ने चाहना राख्दैन। संभावित घटना घटिसकेपछि क्षतिपूर्तिका लागि हामीले आवश्यक कागजातका लागि प्रक्रिया सिकाएर समेत पठाउँछौँ, पुरा भइसकेपछि हकवालालाई दिन्छौँ।
नयाँ कम्पनीहरु थपिएपछि कर्मचारी तानातान भयो भन्ने गरिएको छ, तपाई पनि सुर्या लाइफबाट युनियनमा आउनुभयो? यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हो ?
जनशक्तिको अभाव त छ नै। अर्कोतर्फ कर्मचारीहरु पनि स्वभाविक रुपमा आफ्नो सेवा सुविधामा वृद्धि विकास हुने भएपछि अर्को कम्पनीमा जान्छन्। विभिन्न कम्पनीहरुमा अनुभव संगालेपछि उनीहरुको पेशामा अझ निखार आउँछ। यो त कर्मचारीको क्षमता वृद्धि तथा विकासका लागि अवसर पनि हो।
कर्मचारी तानातान भनेर बुझ्नु हुँदैन। अहिले नयाँ कम्पनीहरु संचालनमा आएपछि पनि धेरैले पुराना कम्पनीबाट कर्मचारीहरु ल्याउने प्रयास गरेका छन्। हाम्रो युनियनमा पनि धेरै कर्मचारी अन्य कम्पनीमा काम गरेका अनुभवी नै छन्। यसले व्यक्ति र संस्था दुवैलाई सक्षम बनाउँछ।
बिमा कम्पनीहरुले कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ, युनियनको कति कित्ता, कहिले पाउँछन् सर्वसाधारणले ?
सर्वसाधारणतर्फ हामीले ६४ लाख ५० हजार कित्ता सेयर जारी गर्नेछौँ। हाम्रो २ अर्ब १५ करोड चुक्ता पुँजीमा ३० प्रतिशत स्वामित्व सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार नै यो संख्यामा सेयर जारी गर्न लागेका हौँ। यसमा म्युचुअल फण्ड तथा कर्मचारीका लागि ५ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ भने बाँकी सेयर सर्वसाधारणले पाउँछन्।
कात्तिक २३ गते भैरहवामा हाम्रो साधारणसभा हुन गइरहेको छ। सो सभाबाट यो प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेपछि हामीले धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य निकायमा प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।
कम्पनीलाई भर्खर संचालनमा ल्याउनुभयो, अब व्यवसाय विस्तारको योजना के छ ?
हामीले यस आर्थिक वर्षभित्र ४० शाखाहरु विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। ति शाखामा प्रमुखदेखि अभिकर्तासम्म हामीलाई जरुरत पर्दछ। ३ हजारदेखि ४ हजार अभिकर्तालाई हामीले तालिम दिने उद्देश्य राखेका छौँ। यसबाट रोजगारी पनि थपिने भयो। ति अभिकर्ताले बिमा सम्वन्धी सचेतना जगाउँदै व्यवसाय विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछन्।
एसएलसी पास भएका नेपाली नागरिकले यस्तो तालिम लिएर सहजै काम गर्न सक्नेछन्। उपत्यकाबाहिर तीन ठाउँहरु इटहरी, वीरगञ्ज र पोखरामा हाम्रो शाखा संचालनमा आई पोलिसीहरु जारी हुन थालेका छन्। हामीले अहिले चार प्रोडक्ट अर्थात पोलिसी बिमा समितिबाट स्वीकृत पाएका छौँ।
शावदिक जीवन बिमा, मनी ब्याक आजीवन जीवन बिमा, वैदेशिक रोजगार र माइक्रोइन्स्योरेन्स हाम्रा स्वीकृत भएका प्रोडक्ट हुन्। त्यस्तै थप चार प्रोडक्स स्वीकृतिका लागि पाइपलाइनमा छन्। अब यीनै ८ प्रोडक्ट हामीले ग्राहकलाई दिने हो।
अन्त्यमा नियामक निकाय, सरकार वा सर्वसाधारणलाई केही सुझाव दिनुपर्ने छ कि ?
म आम सर्वसाधारणलाई के भन्छु भने आफ्नो जीवन बिमा गर्नुहोस्, तपाईले बिमा गर्नु भनेको सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनु हो। जति वर्षका लागि बिमा गर्नुहुन्छ, सो अवधिमा संभावित नोक्सानी परेमा बिमा रकम सहजै पाउनुहुन्छ।
अर्कोतर्फ अवधिभर कुनै नोक्सान वा क्षति भएन भने पनि रकम बचत भई अवधि पुरा भएपछि तपाईले बचत मात्रै नभई थप लाभ समेत पाउनुहुन्छ।
त्यस्तै सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने बिमामा तोकिएको ट्याक्स छुट रकम २० हजार रुपैयाँलाई बढाउनुपर्दछ। अब १ लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्दछ। १ लाख रुपैयाँलाई छुट गरिसकेपछि बिमा गर्नेहरु पनि बढ्छन्। यसले प्रिमियम रकम पनि बढ्दछ।
हामीले संकलन गरेको रकम पनि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी हुन्छ, यसले समग्र अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिई अघि बढाउनु पर्दछ। यसबाट बिमामा सचेतना पनि बढ्दै जान्छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २७, २०७४, ११:०४:३१
एक रुपैयाँले सस्तियो अमेरिकी डलर
प्रिमियर इन्स्योरेन्सले मोबाइलको बीमा गर्ने
सेञ्चुरी बैंकका कार्डहोल्डरले मेडिसिटीको उपचारमा छुट पाउने
सेयर बजार तीन महिनाकै उच्च विन्दुमा